Ankafizo ny faran'ny herinandro miaraka amin'ireo lalao sy fampiharana maimaimpoana na maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (20 Janoary) | Vaovao IPhone
Ankafizo ny faran'ny herinandro amin'ireo lalao sy fampiharana maimaimpoana na maimaim-poana ireo mandritra ny fotoana voafetra (20 Janoary)
Ankehitriny isika dia afaka miteny azy amin'ny vavany lehibe sy ny tomany feno: Zoma ihany izao! Azonao atao izao ny manilika ireo naoty sy asa ampanaovin'ny lehibena anao satria afaka ora vitsivitsy dia afaka ianao hatramin'ny alatsinainy. Ary satria mbola tototry ny hafanan'ny onja mangatsiaka lava isika, tsy misy tsara noho ny mandany ny faran'ny herinandro mafana ao an-trano, mankafy ireo lalao sy fampiharana maimaimpoana ireo (na amin'ny fihenam-bidy tsy hay tohaina) izay hitondrako anao amin'ny iPhone News anio.
Araka ny tadidinay foana dia aza adino fa ny varotra sy ny tolotra rehetra izay ho hitanao etsy ambany dia Fotoana voafetra, noho izany dia azoko antoka ihany fa manan-kery izy ireo amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, saingy tsy fantatro hoe rahoviana no hampiala azy ireo ny developer. Noho izany, na dia eo alohanao ny faran'ny herinandro aza ianao, dia ho maika aho fa hahazo izay mahaliana anao indrindra. Aza avela handositra izy ireo !!
1 MyClassTable ho an'ny mpianatra
2 Lalao matematika ho an'ny akanin-jaza
3 Tsy fitsapana izany: tantara an-tsary RPG velona
4 QuickScanner: Scanner OCR PDF sy mpanonta pirinty momba ny fandraisana ny mailaka amin'ny rakitra
5 Deluxe Deluxe - Fotoana fanjonoana tsara indrindra sy kalandrie jono
6 Songbot: Fampisehoana an-tsary sy hira momba ny fangatahana
MyClassTable ho an'ny mpianatra
Angamba, ity fampiharana ity dia tsy natao hahasalama anao amin'ny faran'ny herinandro, fa azo antoka fa tena ilaina tokoa amin'ny fianaranao. MyClassTable Izy io dia fampiharana "telo amin'ny iray" satria mitambatra miaraka amin'izay ny kalandrie an-dakilasy, ny lisitry ny lahasa ary ny fampiharana ho an'ny Notes.
MyClassTable ho an'ny mpianatra Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro, na izany aza, azonao atao izao amin'ny fihenam-bidy 66%, amin'ny € 0,99 ihany.
Lalao matematika ho an'ny akanin-jaza
Lalao fanabeazana mahafinaritra izay afaka ankafizinao amin'ny zanakao rehefa mianatra ny heviny voalohany momba ny matematika «amin'ny alalàn'ny lalao matematika mahafinaritra mihoatra ny 100»Starring ny biby tianao.
Ity lalao ity dia natokana ho an'ny zazalahy sy zazavavy eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny valo taona, ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro fa ankehitriny azonao atao ny manafaka azy io mandritra ny fotoana voafetra.
Lalao kilasimandry€ 5,49
Tsy fitsapana izany: tantara an-tsary RPG velona
Tsy fitsapana io Izany dia sary sy sary mifandray izay hitondra anao any amin'ny tontolo apokaliptika izay tsy maintsy hametrahanao ny fitsapana ny fahavelomanao ao anatin'ny korontana mifehy ny "andro farany", ao anatin'izany ny entona mahafaty hafahafa izay mandrahona ny zanak'olombelona.
Tsy fitsapana izany: tantara an-tsary RPG velona Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
QuickScanner: Scanner OCR PDF sy mpanonta pirinty momba ny fandraisana ny mailaka amin'ny rakitra
QuickScanner Pro manova ny iPhone, iPad na iPod Touch anao ho scanner finday tena izy "izay azonao alaina amin'izay alehanao ary ampiasainao hatraiza hatraiza". Ho fanampin'izany, dia ahitana endri-javatra fanovana be dia be toy ny fihodinana, mainty sy fotsy, griscale, loko, OCR, detector pejy na fizarana rahona na amin'ny tambajotra sosialy.
QuickScanner Izy io dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro, saingy azonao atao maimaim-poana izany.
QuickScan: Scanner OCR€ 1,09
Deluxe Deluxe - Fotoana fanjonoana tsara indrindra sy kalandrie jono
Mpankafy mpanjono? Avy eo ity no rindranasa izay hampiasainao betsaka amin'ny fitsangatsangananao.
Ny Fishing Deluxe dia manampy anao amin'ny drafitra ny dianao, maminavina andro sy fotoana voafaritra tsara mety hahomby amin'ny jono, na aiza na aiza toerana.
Ahoana ny fomba fiasa? Ny ora fanjonoana tsara indrindra dia isaina amin'ny fampahalalana momba ny Volana sy ny Masoandro. Fantaro hatrany ny andro fanjonoana tsara indrindra sy ny fotoana manokana amin'ny Fishing Deluxe!
Deluxe Deluxe Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro, saingy azonao atao izao amin'ny fihenam-bidy 66% amin'ny 0,99 Euros ihany mandritra ny fotoana voafetra.
Deluxe Deluxe - Fotoana fanjonoana tsara indrindra sy kalandrie jono€ 3,49
Songbot: Fampisehoana an-tsary sy hira momba ny fangatahana
Con Songbot azonao atao «ny mikaroka ny onjam-peo rehetra manerantany ho an'ilay hira tianao henoina. Soraty fotsiny ny anaran'ny hira na ny mpanakanto tadiavinao ary manomboka mihaino avy hatrany. Na misafidy ny lisitry ny milalao hira amin'izao fotoana izao amin'ny karazana tianao indrindra. »
Songbot Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro, saingy azonao atao maimaim-poana izany mandritra ny fotoana voafetra.
Songbot: Fampisehoana an-tsary sy hira momba ny fangatahana€ 2,29
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ankafizo ny faran'ny herinandro amin'ireo lalao sy fampiharana maimaimpoana na maimaim-poana ireo mandritra ny fotoana voafetra (20 Janoary)
Apple dia namoaka ny fananana iOS 10 ho an'ny Sketch sy Photoshop
Apple Mamarana ny programa Generation iPod Nano Battery Generation voalohany